Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || रेडियोथेरापी मेसिन सञ्चालनमा – kayakairan.com
रेडियोथेरापी मेसिन सञ्चालनमा
लामो समयदेखि बिग्रिएको भरतपुरको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको रेडियोथेरापी मेसिन सञ्चालनमा आएको छ । क्यान्सर रोगीको उपचारका लागि सेकाई गर्न प्रयोग हुने लिनियर एक्सीलेरेटर मेसिन सुचारु भएपछि बिरामीले सेवा पाउने भएका छन् ।
विगत एक वर्षदेखि उक्त मेसिन बिग्रिदा बिरामीलाई निजीमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य रहेका थिए । बिरामीको सुविधालाई ख्याल गरेर तत्कालका लागि पुरानो मेसिनलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको हो । मर्मतका लागि मात्रै १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा आउने दैनिक ५ सयभन्दा बढी बिरामीमध्ये झण्डै त्यसको आधी संख्याका बिरामीको सेकाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मेसिन बनेसँगै फोक्सो, स्तन, पाठेघर, भोजननली, आमासयमा सेकाई हुने भएको छ । करिब तीन महिना पालो कुर्नुपर्ने बाध्यताबाट बिरामीले छुट्कारा पाएको क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले बताए । कार्तिकमा नयाँ प्रविधिको रेडियोथेरापी मेसिन ल्याइने भएपनि बिरामीको सेवाका लागि मर्मत गरिएको कार्यकारी निर्देशक डा. आचार्यले बताए ।